Ukuvimbela Ukwebiwa Kwemfuyo
Abakhiqizi bezinyama ezibomvu minyaka yonke balahlekelwa amakhulu ezinkulungwane zamaRandi ngenxa yokubanjwa kwesitokisi. I-National Stock Theft Prevention Forum ineziphakamiso ezilandelayo ezingasiza nje ukuvikela abalimi ngokubheja kwezitshalo kodwa nokunciphisa ukushushiswa lapho isela libanjwa.
Maka Izilwane Zakho
Ngokomthetho eNingizimu Afrika, zonke izilwane kufanele ziphawulwe ngokucacile ngenombolo yokuhlonza eyingqayizivele yomnikazi. Kunzima ukugweba amasela esitolo uma ubunikazi bezilwane bengenakufakazelwa.
Izilwane kufanele zilandwe njalo ukuze zibonwe ukulahlekelwa nezinkinga ezingenzeka. I-National Stock Theft Forum inxusa abalimi ukuba benze okungenani kanye ngesonto, uma kungenakwenziwa nsuku zonke. Abalimi kufanele bakhethe ukubala izilwane ngokwabo, kodwa uma kungenakwenzeka ukwenza amasheke okuhlola njalo ukuqinisekisa ukuthi izinombolo zilungile.
Izilwane ezilahlekile kanye nokukhwabanisa kuzame ukubikwa emaphoyiseni ngokushesha. Uma usalinde isikhathi eside uthola ubufakazi obulandelayo bese ubamba amasela.
Izilwane ezingezakho kufanele zibikwe emaphoyiseni nasemapulazini angomakhelwane. Awufuni amasela ukuba asebenzise indawo yakho njengendawo yokufihla ukuphangwa kwabo, noma okubi nakakhulu kodwa kubhekwe njengengxenye noma isela.
Gcina irejista ngokuphelele ngemininingwane eminingi ngangokunokwenzeka futhi ugcine lokhu kubhalisa kusesikhathini.
Abanikazi abasha kudingeka banikezwe amadokhumende wokuhlonza aqukethe igama nesibongo somnikazi wangaphambilini, igama nekheli lomthengi nomdayisi nosuku lokuthengiselana. Umthengi kufanele agcine le dokhumenti unyaka njengobufakazi bokuthenga.
Abathengisi noma abadayisi badinga isitifikedi sokuqinisekisa ukuthi bangathengisa imfuyo egameni lomnikazi. Idethi yokugunyazwa kufanele ibe yamuva futhi ifaka imininingwane mayelana nohlobo noma uhlobo lwesitoko, inombolo yesitoko, uphawu lokukhomba, ubulili, kanye nombala wesitoko uma kungenakwanga ngendlela enqunyiwe.
Abathungathi kanye nabathumele badinga isitifiketi sokususa ngaphandle kokuthi isitoreji sithunyelwe ngomgwaqo womphakathi ohamba ezweni lakho. Isitifiketi kumele sibe negama kanye nekheli lomuntu okhishwe isitifiketi, igama nekheli lomnikazi wesitoko, indawo okuvela kuyo nokuthi isitokwe siyathunyelwa, igama lomshayeli, usuku lokukhishwa futhi uma ulwazi olufanele mayelana nemoto yokuthutha. Uhlobo noma uhlobo lwe-stock kanye nompawu wokukhomba, ubulili, inombolo nombala wesitoko, uma kungenakwanga ngendlela enqunyiwe, kufanele kukhonjiswe.
Abalimi ngokuvamile ababibi ukwebiwa kwesitokisi, ngenxa ye-schlep enkulu nesikhathi esithathayo ukwenza kanjalo. Ukubika amacala kubalulekile, hhayi kuphela ukumbamba abenzi bokubi, kodwa futhi ngoba kuzokwenza imboni ibe nesithombe esinembile ngokubaluleka kokubanjwa kwesitokisi, okuzoholela ekutheni uhulumeni enze izinsiza eziningi, ngokwemisebenzi namandla, etholakalayo ukulwa nalobugebengu.
Futhi khumbula ukuthi ngokushesha uma icala libikwa, kungcono amathuba okuba abenzi bokuthi babanjwe.
Abahlukumezi bavame ukuhamba mahhala, naphezu kwayo yonke imizamo kanye nesikhathi esitshala imali yokubamba nokwakha icala labo, lapho abalimi bengabonisi ukufakaza enkantolo. Khumbula ukuthi ukushushiswa okuphumelelayo kuyoba ngenzuzo yomphakathi wonke wokulima.